“Meles Down” Meel Isla Taag Midhkaas Macnihiisa ma Aanan Garan – Rasaasa News
“Meles Down” Meel Isla Taag Midhkaas Macnihiisa ma Aanan Garan
Jun 22, 2010 1992, 1993, 1994, ethiopia, Kenya, olf, ONLF, oromo, shufto
Waa dhibaato aad u wayn adiga oo baahan, hadii aad garan waydo waxa baahida kaa bi,in kara. Arkaa fuulnimaduna waa mid Jwxo-shiil, afka u galisay ummad uusan ogayn ujeedadeedda siyaasadeed oo uu ku anfariiray.
Mabda,a ugu horeeya ee Jabhadii wadaniga Xoraynta Ogadeeniya ahayd, intii ayna fasaqin waxaa uu ahaa, amaba uu magaceeedu ka turjumayey waxay ahayd “xoriyad”. Taas oo mid ahaan uun lagu keeni karo; Xabad ama Xaajo.
Sanadkii 1992, waxay ONLF qaadatay oo ay aqbashay dastuurka federaalka ah ee Itobiya, waxayna ka qayb gashay doorashadii dhacday sanadkii 1993, iyada oo ku guulaysatay kuraastii doorashooyinka ee maamulka Somalida Ogadeeniya.
Dad yar oo uu Dr. Dolal ka mid ahaa ayaa diidanaa in aan marna la qaadan, wax ka yar xornimo, taas oo uu waligii ku cel celin jiray ilaa maalintii la dilay wax yar ka hore.
Jwxo-shiil iyo labadiisa dhoon horaad Qaaxo iyo Ina-dhuubo, waxba umma cada mana ka jawaabi karaan waxa ay rabaan, oo Ina-dhuubo waa kii ahaa taliyaha booliska [Kilal 5 commissioner 1993].
Sanadkaas waxaa uu ahaa, markii ugu horaysay ee taariikhda ay Somalida Ogadeeniya soo dhisteen maamul daakhili u egg, mudo todobaatan sano ah, waa xiligaase. Waxaana waxad u noqday maamulkaas Cabdulahi Maxamed Sacdi, waxaana dhashay khilaaf siyaasadeed oo ah xukun hunguri oo u dhaxeeyey Ina-dhuubo iyo Sacdi.
Waxaana ay Itobiya iyo ONLF-tii saxda ahayd mid waliba ku dhawaaqday dagaal sanadkii 1994. Tan iyo intii xiligaasi ka dambaysay waxaa socotay colaad u dhaxaysay labada dhinac, ururka ONLF waxaa uu galay dagaal Jabhadayn ah [guerrilla].
Sanadkii 1998, kolkii ay collaadu dhex martay Eritrea iyo Itobiya, dagaalkii ay waday ONLF, waxaa uu yeeshay waji cusub waxaana uu dagaalkii noqday dagaal u dhaxeeya Eritrea iyo Itobiya. Waxayna ciidamadii ONLF oo xambaarsanaa mabaa,diida Eritrea ay dagaal ku qaadeen shacabka Somalida Ogadeeniya iyo xubnaha ururka ONLF ee iyagu diidanaa faragalinta Eritrea.
Maanta oo uu ururkii ONLF u kala jaban yahay 2 garab, oo garab ka mid ah uu bilaabay in uu heshiis la galo Itobiya, ayaa waxaad arki waxayaabo badan oo kaa yaabiya.
Waxaa midoobay garab ONLF ah, garab OLF iyo Qurbo joogta Eritrea oo iyaga oo isku duuban sid wada jir ah meelo badan banaanbaxyo aan ujeedo lahayn uga dhiga dalalka reer galbeedka.
Garabka uu hogaamiyo ninka lagu naanayso Jwxo-shiil, waxaa ka lumay hadafkii uu lahaa ururka ONLF. Waxaana uu hada ku jiraa colaad sokeeye iyo xin loo xoog wayn, waxaana ugu wacan arintaas dunuub badan oo ay u haystaan dad badan oo reer Ogadeeniya ah.
Waxaa wax lala yaabo ah banaanbaxyada ay sheegto kooxda Jwxo-shiil in ay kaga soo horjeedo Itobiya ayey ku qaylyaan “Meles down” oo micnaheedu yahay Meles ha dhaco, waayaabe waa kuma ka ay doonayaan.
Labada kalmadood ee isku xiga ayey mar odhan meles ha dhaco marna Ogadeeniya ha xorowdo.
Jiha wareer aan jid iyo jiha toona lahayn, ayey kooxdu ku lugoysay dadka ay saaxiibtinimada iyo qaraabonimada ku wadato.
Waxaase dhab ah in maanta ay Itobiya qaaday dhabihii ay qaaday dawladii Kenya sanadkii 1968, ka dib kolkii ay shaqaalaysay ciidamo Boolis ah oo u dhashay gabalka NFD. Halkaas waxaa ku soo xidhmay wixii ay ku magacaabi jirtay “shufto”, dadweynaha reer NFD-na waxaa u soo galbatay xasilooni iyo nabad xornimo ha joogtee.